महाकाली अञ्चल अस्पतालको त्यो अविस्मरणीय घटना - Health Today Nepal
महाकाली अञ्चल अस्पतालको त्यो अविस्मरणीय घटना
August 26th, 2018 स्वास्थ्य विशेष0comments
डा. दीपेन्द्ररमण सिंह,
मैले सर्पको टोकाइको उपचार गर्न सुरु गरेको बेलैमा मेरो जीवनको एउटा अविस्मरणीय घटना घट्यो । म त्यतिबेला महाकाली अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत थिएँ । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट भएको नाताले मैले अस्पतालको टेक्निकल कार्यमात्र नभएर प्रशासनिक काम पनि गर्नुपर्दथ्यो । चैत्र, वैशाख र जेठको अति नै गर्मी दिन पार गरिसकेको भए तापनि महेन्द्रनगरमा असार महिनाको त्यो दिन त्यस किसिमको गर्मी कहिल्यै भएको थिएन । त्यस दिन पनि एकदमै व्यस्त दिनको काम सकेर म एकछिन सोफामा ढल्की रहेको थिएँ, जोडले ढोकाको घन्टी बज्न थाल्यो । एकजना कार्यालय सहयोगी अचम्म गरी अगाडि ढोकामा उभिएको रहेछ । यो एकदमै अचम्मको घटना थियो मेरो लागि । विषाक्त सर्पको टोकाइबाट पीडित दुईजना बिरामीहरू ल्याइएका रहेछन् । म हतारिएर इमरजेन्सी कक्षमा गएँ, त्यहाँ ती दुई बिरामीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले घेरिरहेका थिए । ती दुवै बिरामी एकै परिवारका थिए र सायद एउटै सर्पले टोकेको हुनुपर्छ ।
परिवारजन अति नै डराएको अवस्थामा थिए र केही भन्न पनि सकेका थिएनन् । उनीहरूले आफ्नो परिवारको ज्यान जोगाउन र जति सक्दो राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि बिन्ती गरे । मेरा सहकर्मीहरूले सधैझंै उनीहरूलाई उपचारका फाइदा बेफाइदाको महत्वको बारेमा बुझाउन थाले । उनीहरूले हाम्रो उपचार पद्धति माने र हामी माथि विश्वास राखेर गए । ती दुवैजना बिरामी चौधरी परिवारका थिए । बूढी हजुरआमा ६५ वर्षको र नाति १० वर्षका थिए । ती केटा होसमा नै थिए र मैले मेरा एकजना सिनियर सहकर्मी र दुईजना असिस्टेन्टलाई उनलाई हेर्न लगाएर आफू ती जटिल स्थितिमा भएकी बूढी महिलालाई हेर्नतिर लागेँ । उनी ज्यादै पीडामा देखिन्थिन् र शायद विषको असर श्वासनलीसम्म पुगिसकेको थियो ।
भाग्यवश भर्खरै एउटा पल्स अक्सिमिटर अस्पतालमा ल्याइएको थियो जसले गर्दा हामीले अक्सिजनको सेचुरेसन लेवल नाप्यौ । निकै प्रयासपछि सेचुरेसन लेबल घट्न थाल्यो । हामीले बिरामीको परिवारलाई सबै कुरा बुझाएरमात्र इन्टुबेसन गर्ने सल्लाह ग¥यौं । मेरा जुनियर सहकर्मीहरू त्यति निश्चिन्त त थिएनन् तर पनि मेरो उपचार विधिलाई अपनाए । सानो केटो जसलाई वार्डमा राखिएको थियो उसलाई पनि सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो र इन्टुबेसनको आवश्यकता प¥यो । यसरी एकै पटक पालैपालो सर्पको टोकाइलाई इन्टुबेसन गरिएको पहिलो पटक थियो । यिनलाई चार घन्टासम्म लगातार हेरिरह्यौं र तत्पश्चात विस्तारै श्वासप्रश्वासमा केही सुधार देखिन थाल्यो । हामीलाई पनि अब बाँकी एन्टिस्नेक भेनमले नै काम गर्छ भन्ने विश्वास भयो । यस प्रक्रियाद्वारा उपचार यस ठाउँमा गर्नलाई हामी डराइरहेका थियौ तर ज्यान बचाउन सकेकोमा हामी धेरै खुसी थियांै ।
बूढीआमालाई बाहिर इमरजेन्सीमा राखेर लगातार इमरजेन्सीका स्वास्थ्यकर्मीहरू लागिपरेका थिए । सवैजना यसको परिणाम के होला भनेर डराइरहेका थिए । मलाई पनि यसको निदान के होला भन्ने लागिरहेको थियो । त्यसैले म नजिकै इमरजेन्सी कक्षमा नै आराम गरे अनि के कस्तो भइरहेछ भनेर समयसमयमा हेरिरहेँे । केही समयपश्चात बूढीआमाको स्वास्थ्यमा सुधार आए पनि श्वासप्रश्वासमा भने समस्या आइरहेको थियो । बिहानको ४ बजेतिर ड्युटीमा भएको डाक्टरले मलाई इन्टुबेसनको लागि सल्लाह लिन आउनुभयो । हामीले नली बाहिर निकाल्यौ तर उनलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो । फेरि इन्टुबेसन ग¥र्याैं तर हामीलाई धेरै आशा लागेन । बिहानको ७ः३० बजेतिर बूढीआमा सजिलै सास फर्कै हुनुहुन्थ्यो । यस पटक हामीले नली बाहिर निकालेनौ, नलीमार्फत नै सास फेर्न दियौ । विस्तारै उनको स्वास्थ्यमा सुधार आउँदै गएपछि हामीले अक्सटुबेट ग¥र्यौं । लगातार उपचार गरिरह्यौं र अझ सुधार आउँदै गयो ।
अर्को दिन त हाम्रो लागि धेरै नै महत्वपूर्ण दिन थियो । हामीले दुईवटा सर्पको टोकाइको रातभरि उपचार गरी ज्यान जोगाएका थियौ । म त्यस दिन धेरै थाकेको भए पनि मलाई धेरै खुसी लागेको थियो किनकि हामीले अरूको ज्यान जोगाउनमा सफलता हासिल गरेका थियौं । बिहानको राउन्डमा त्यो सानो केटो अलिकति होसमा आइसकेको थियो र न्युरोटोक्सिनको असर पनि विस्तारै हराउँदै थियो । अर्कोतर्फ बूढीआमालाई अझै रिंगटा लागिरहेको थियो तर रातिभन्दा धेरै होसमा आइसकेकी थिइन् । उनका परिवार, खासगरी सानो केटाको आमा र बूढीआमाको कान्छो छोरा निक्कै नै हर्षित देखिन्थे । उनीहरूको उज्यालो अनुहारले पनि हाम्रो मनमस्तिष्कमा राम्रो असर छोड्यो । आशा छ, यस ठाउँका मान्छेहरूका लागि अरू राम्रो सेवा दिन अब आउँदा दिनहरूमा पनि यस घटनाले गर्दा हामीलाई अझ थप बल प्रदान गर्नेछ ।
( डा. सिंह स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत गुणस्तर मापन तथा नियमन महासाखाका निर्देशक हुन । )
Previous article सोलुखुम्बुमा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स संचालनमा
Next article एप्पोन कप फुटवलको उपाधि एप्पल फर्मास्विटिकल्सलाई
पाँच वा त्यो भन्दा बढी बच्चा जन्माएका बावुआमालाई मुटु रोगको खतरा बढी
औषधिमा आत्मनिर्भरता र हाम्रो सरोकार
Apr 24th 3:20 AM
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनप्रति स्वास्थ्यमन्त्री नै असन्तुष्ट
Apr 24th 2:52 AM
४२६ महिलाको निःशुल्क क्यान्सर परीक्षण
२० वर्षीया एक युवतीले जन्माइन् एकै पटक चार सन्तान
Apr 23rd 3:36 AM
मनमोहन कार्डियो थोरासिक, भास्कुलर एन्ड ट्रान्स्प्लान्ट सेन्टरमा पुनःश्रेष्ठ
Apr 23rd 2:56 AM
महाकाली अञ्चल अस्पतालमा निःशुल्क औषधि वितरण बन्द
Apr 23rd 2:32 AM
यी हुन् हृदयघात हुनु एक महिनाअघि शरीरमा देखा पर्ने संकेत…
Apr 23rd 1:58 AM
अस्पताल निर्माणको लागि एक बृद्धद्वारा तीन करोड सहयोग
Apr 22nd 12:24 PM
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा स्वास्थ्य परिक्षण